M/weyne Faroole oo dalka dib ugu soo noqday, kana hadlay dadaalada nabadeed ee dalka iyo doorka Puntland. – Radio Daljir
M/weyne Faroole oo dalka dib ugu soo noqday, kana hadlay dadaalada nabadeed ee dalka iyo doorka Puntland.
Garowe, 17, June – Weftigii uu horkacayay madaxweynaha dowladda Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ee ka qayb galay shirarkii ugu dambeeyey ee arrimaqha Soomaaliya ee ka kala dhacay Nairobi iyo Kampala ayaa maanta dib ugu soo noqday caasimada Puntland ee Garowe.
Madaxweynaha oo warfidiyeennada kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa ka gaabsaday in uu qeexo mawqifka Puntland ee ku aaddan shirkii Kampala ee qodobada ka soo baxay ay alooseen ismaandhaaf siyaasadeed oo hor leh oo u dhexeeya xukuumadda federaalka ah iyo qaybaha kale ee dawladda federaalka; waxaa uu madaxweyne Faroole sheegey in arrinkaasi uu u yaallo golayaasha dawladda.
Madaxweynaha Puntland ayaa tibaaxay in mar kasta mawqifka Puntland ee madalaha kulamadaasi uu ahaa in la qabto doorasho xilliga ay ku dhantahay waqtiga sharciga ah dawladda federaalku.
Shirkii wadatashiga ahaa ee lagu waday in bishan lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa uu madaxweynaha Puntland sheegey in dib looga fiirsanayo, sababo la xidhiidha xaaladda ammaan ee magaaladaasi, isla markaana ay guddi qiimayn ah oo ka socda QM tagi doonaan degaanno ay ka mid yihiin Puntland, iyo Galmudug, kaddib markii sida uu madaxweynuhu sheegey la soo bandhigay soo jeedimmo ku aaddan in ay kulankaas marti galiso mid ka mid ah maamullada nabdoon ee dalka ka jira.